Hogaamiyaha Mucaaradka oo u digay IEBC – The Voice of Northeastern Kenya
Hogaamiyaha Mucaaradka oo u digay IEBC
Hogaamiyaha garabka mucaaradka dalka Raila Odinga ayaa u digay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano IEBC.
Raila ayaa gudigan kaga digay in ay codbixinta doorashada lagu wado in ay dalka ka dhacdo sanada inagu soo aadan ee 2017-ka ay ka soo saaran natiijo ku saleeysan wax isdaba marin.
Masuulkan ayaa xisbiga talada dalka haayo ee Jubilee ugu baaqay in ay u hogaansamaan soo jeedimaha gudiga isku dhafka ah ee ka kooban xubno ka soo kala jeedo xisbiyada dalka taas o ku aadanayd isbadalada la doonayo in lagu sameeyo gudiga doorashooyinka ee IEBC.
Dhinaca kale Raila ayaa eedeyn kulul dusha uga tuuray xukumadda Jubilee isagoo sheegay in shirkadda loo dhiibay shaqada ah in ay baaritaano ku sameeyso codbixiyaasha dalka in ay tahay shirkadd guuldareeysatay.
Dhawaan ayay ahayd marki gudiga IEBC ay khandaraas siiyen shirkadd la yirahdo KPMG taas oo baaritaano ku saameyn doonto codbixiyaal la sheegay in ay kor u dhafaayan 15 milyan oo qof.
Ugu dambeyn hogaamiyahaan ayaa sheegay in ay ogolaan doonan oo kaliya doorasho u dhacdo si xaq iyo xor ah oo aan lahayn wax isdaba marin.
Dhanka kale Senetarka Countiga Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ayaa ka jawaabay haddalada Raila u sheegay eek u aadanaa Khandaraaska IEBC ay siisay shirkadda KPMG isagona ugu baaqay in u dadaal u galo sida uu ugu guuleysan lahaa doorashada dalka ka dhici doonto sanada 2017-ka.
Madaxweyne kuxigeenka dalka William Ruto ayaa isna sheegay in Gudiga IEBC ay yihiin gudi Madax banaan oo aan cidna la shaqeyneynin haddi ay ahaan lahayd xisbiga Jubilee ama Isbahaysiga CORD
Ruto ayaa intaas ku daray in xukumadda Jubilee ay ku dadaaleyso oo kaliya sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho nabad ah oo aysan ogolaan doonin in dalka ay ka dhacdo wax khalalaase ah haba yaraate.
Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa horay ugu goodiyay in ay seegi doonan ka qeyb galida doorashada guud ee dalka ka dhici doonto sanada inagu soo foodleh waa haddi ay ku qanci waayan qabka ay wax u wadaan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC.
← Shacabka magaalada Xalab ee suuriya oo maalinkii labaad la daad gureyn doono
Xukumadda Turkiga oo xabsiga u taxaabtay in ka badan 50 saraakil →